Guddiga taakuleynta ee qaraxii Zoobe oo shaaciyey arrin aan horey loo ogeyn iyo lacag dhan... - Caasimada Online
Home Warar Guddiga taakuleynta ee qaraxii Zoobe oo shaaciyey arrin aan horey loo ogeyn...
Guddiga taakuleynta ee qaraxii Zoobe oo shaaciyey arrin aan horey loo ogeyn iyo lacag dhan…
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga taakuleynta ee Qaraxii Zoobe (14 October) ayaa warbixin dheer kasoo saaray waxyaabihii ay qabteen, lacagaha baxay, kuwa la hayo, caqabadaha guddiga haysto iyo arrimo kale oo isla howlaha guddiga un ku saabsan.
Xubnaha guddigan oo maaanta saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay iney isku dubarideen qorshe meelmar noqday oo uu uga jawaabayey khasaarihii ka dhashay qaraxii Zoobe.
Guddiga ayaa sheegay iney taakuleyn siiyeen qaar kamid ah dadkii ehladooda ku dhinteen qaraxii Zoobe, dadkii dhaawaca ahaa, dad muruqmaal ah iyo kuwo qaraxii Zoobe uu waxyeello u geystay.
Waxay sheegeen in guddiga ay soo gaartay lacag dhan $3,802,847.43 ay bixiyeen lacag dhan $1,374,441.87 halka ay taallo lacag dhan $2,427,500.56.
Dhanka kale, guddiga taakuleynta ee Qaraxii Zoobe ayaa sidoo kale muujiyey cabasho dhanka ammaankooda ah, xafiis ay ku shaqeeyaan oo aanay haysan iyo sidoo kale agabkii lagu fududeyn lahaa howlahooda shaqo.
Halkaan hoose ka akhriso qoraalka guddiga.